Ondrej Kudela oo seegi doona kulanka Arsenal | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Ondrej Kudela oo seegi doona kulanka Arsenal
Ondrej Kudela oo seegi doona kulanka Arsenal
Posted by: Ahmed Haaddi April 6, 2021
Himilo – Slavia Prague ayaa sheegtay maanta in daafacooda dhexe Ondrej Kudela, oo ay baareen UEFA iyo booliska Scotland oo lagu eedeeyay cunsuriyad, uu seegi doono kulanka lugta hore ee wareega quarter-finalka Europa League ee Khamiista ay la ciyaarayaan Arsenal dhaawac sanka ah.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Rangers Glen Kamara ayaa ku eedeeyay Kudela inuu cunsuriyad kula kacay isaga intii lagu guda jiray ciyaartii wareega 16ka ee ka dhacday Ibrox bishii hore.
Slavia, oo wadar ahaan ku badisay 3-1 si ay ugu gudubto wareega 8-da, ayaa beenisay sheegashadaas, taa bedelkeedana waxay sheegeen inay dacwad ciqaab ah ka gudbin doonaan Kamara oo lagu eedeeyay inuu weeraray Kudela ciyaarta ka dib.
UEFA iyo booliska Scotland ayaan wali go’aan ka gaarin kiiska.
Afhayeenka Slavia Michal Bycek ayaa u sheegay Czech TV: “Ma fileyno inuu naga caawiyo Arsenal.
Slavia ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in Kudela uu “sanka nabar ka gaadhay” iyo “qandho sare”.
Warbaahinta Czech ayaa sheegtay in Kudela uu soo gaaray dhaawac intii lagu guda jiray kulankii Czech Republic ee isreebreebka Koobka Adduunka ee ay la ciyaarayeen Wales isbuucii hore ka dib tartan uu galay Gareth Bale.
Previous: Haweeney ogaaday caruusadda wiilkeeda inay tahay gabadheeda
Next: Maqal- Suwar min xayaati saxaabah- Casharka 49aad
Gonzalo Higuain oo xaqiijiyay in Inter Miami ay dooneyso saxiixa Lionel Messi
Ronald Koeman imisa kulan ayaa loo qabtay si uu u badbaadiyo shaqadiisa?